Nhumwa dzeANC Dzinosangana neZanu PF Chete
Chikwata chebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC chaita musangano neZanu PF muHarare pachavimbisa kuti chichadzoka zvakare kuzosangana nevemapato anopikisa.
Chikwata cheANC ichi, icho chiri kutungamirwa nemunyori mukuru mubato iri, VaAce Magashule, chaita musangano nebato reZanu PF pamuzinda weZanu PF muswere wese.
VaMagashule vati vachadzoka kuzoita misangano munguva inotevera nevemapato anopikisa zvichitevera zvikumbiro zvemapato aya, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevamiriri vedzimwe nyika vari muZimbabwe.
Mapato anopikisa akawanda anga akatogadzirira kusangana nechikwata cheANC ichi achifunga kuti achasangana nenhumwa dzeANC dzisati dzadzokera kuSouth Africa.
Aka ndekechipiri mapato anopikisa achigarira guyo sembwa sezvo nhumwa dzemutungamiri weSouth Africa, dzakapindawo munyika mwedzi wapera asi dzikangoonana chete nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa.
Mapato anopikisa akatozoudzwa kuti musangano wawo nenhumwa dzaVaCyril Ramaphosa hauchaitwa sezvo nhumwa idzi dzaida kutanga dzasuma VaRamaphosa. zvakanga zvabuda mumusangano wadzo naVaMnangagwa.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatshwayo, vati kana ANC ichiuya muZimbabwe isingagadzirise gakava riripo panyaya yesarudzo dzapfuura nenyaya yekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu, hapana zvainenge yaita.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi vati havakwanisi kutaura sezvo musangano wanga uchiri kuenderera mberi.
Kushanya kwechikwata ichi kunotevera musangano wekomiti yepamusoro yeANC wakaitwa svondo rapera uyo wakakurudzira kuti chikwata ichi chizoita nhaurirano neZanu PF pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika.
Zanu PF inoti muZimbabwe hamuna dambudziko ririmo uye vemapato anopikisa vakaita seMDC Alliance vanofanira kuuya kunhaurirano dziri kuitwa pasi pePolitical Actors Dialogue kana kuti Polad kana vaine zvinyunyuto.